December 2018 – Dhammadīpa
Posted on 29 Dec 2018 by Ashin Sopāka
“I abandoned the five hindrances
So I could realise security from the yoke;
And I picked up the Dhamma asamirror,
For knowing and seeing myself.
“I checked over this body
All of it, inside and out.
My body looked vacant.” – Thag 2.26
“Pañca nīvaraṇe hitvā,
“Paccavekkhiṁ imaṁ kāyaṁ,
tuccho kāyo adissathā”ti.
“Sau khi từ bỏ năm pháp che lấp nhằm đạt đến sự an toàn khỏi các ràng buộc, sau khi cầm lấy cái gương soi Giáo Pháp có sự biết và thấy được bản thân, …
… tôi đã quán xét cái thân thể này, toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài, của bản thân và của người khác; thân đã được thấy là rỗng không.”
ငါသည် နီဝရဏငါးပါးတို့ကို ပယ်စွန့်ဖျက်ဆီး၍ ယောဂလေးပါးတို့သည် မနှိပ်စက်အပ်သော နိဗ္ဗန်ကို ရခြင်း ရောက်ခြင်းငှါ မိမိ၏ဉာဏ် အမြင်ဖြစ်သော တရားတည်းဟူသော မှန်ကြေးမုံကို ယူ၍ အဇ္ဈတ္တိကာယတန ဗာဟိရာယတနနှင့်တကွဖြစ်သော ဤကိုယ်အားလုံးကို ဉာဏ်ဖြင့် ရှုဆစ်ဖြင်ခဲ့ပြီ၊
ဤသို့ ရှုဆင်ခြင်သော ငါ့အား မိမိသန္တာန်၌၎င်း သူတပါးသန္တာန်၌၎င်းဖြစ်သော ခန္ဓာငါးပါးဟူသော အတ္တဘောသည် နိစ္စ သုခစသည်တို့မှ အချည်းနှီးဖြစ်၍ ဉာဏ်၌ ထင်လာ၏။
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, mindfulness, non-self, wisdom
Posted on 22 Dec 2018 by Ashin Sopāka
“He always sleeps well,
“Having cut off all attachments,
having attained peace of mind.” AN 3.35
“Sabbadā ve sukhaṁ seti,
“Sabbā āsattiyo chetvā,
vineyya hadaye daraṁ;
Upasanto sukhaṁ seti,
santiṁ pappuyya cetaso”ti.
“Luôn luôn được an lạc,
မကောင်းမှုကို အပပြုပြီးသော၊ ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသော၊ ကိလေသာ မရှိသဖြင့် ငြိမ်းအေးသော၊ ကိလေသာဥပဓိမရှိသော အကြင် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် ကာမဂုဏ်တို့၌ မလိမ်းကျံ။ ထို ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် အခါခပ်သိမ်း စင်စစ် ချမ်းသာ စွာ အိပ်ရ၏၊ အလုံးစုံသော တဏှာတို့ကို ပယ်ဖြတ်၍ စိတ်နှလုံး၌ ပူလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းအေးစေပြီး၍ ငြိမ်းအေးသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် နိဗ္ဗာန်သို့ စိတ်ဖြင့် ရောက်၍ ချမ်းသာစွာ ကျိန်းစက်ရ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
Posted in Dhamma	| Tagged attachment, dhamma, nibbāna, sleep
Posted on 15 Dec 2018 by Ashin Sopāka
“Just as, bhikkhus, an oil lamp burns in dependence on the oil and the wick, and with the exhaustion of the oil and the wick it is extinguished through lack of fuel, so too, bhikkhus, whenabhikkhu feelsafeeling terminating with the body … terminating with life … He understands: ‘With the breakup of the body, following the exhaustion of life, all that is felt, not being delighted in, will become cool right here.’” SN 54.8
“Seyyathāpi, bhikkhave, telañca paṭicca, vaṭṭiñca paṭicca telappadīpo jhāyeyya, tasseva telassa ca vaṭṭiyā ca pariyādānā anāhāro nibbāyeyya; evameva kho, bhikkhave, bhikkhu kāyapariyantikaṁ vedanaṁ vedayamāno ‘kāyapariyantikaṁ vedanaṁ vedayāmī’ti pajānāti, jīvitapariyantikaṁ vedanaṁ vedayamāno ‘jīvitapariyantikaṁ vedanaṁ vedayāmī’ti pajānāti, ‘kāyassa bhedā uddhaṁ jīvitapariyādānā idheva sabbavedayitāni anabhinanditāni sītībhavissantī’ti pajānātī”ti.
“Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu, duyên tim, một cây đèn dầu được cháy sáng. Nếu dầu và tim của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, vị ấy rõ biết: “Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân”. Khi Tỷ-kheo cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy rõ biết: “Tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng”. Khi thân hoại mạng chung, vị ấy rõ biết: “Ở đây, tất cả những gì được cảm thọ đều không có gì được hân hoan, và sẽ trở thành mát lạnh.”
ရဟန်းတို့ ဥပမာသော်ကား ဆီကို စွဲ၍လည်းကောင်း၊ မီးစာကို စွဲ၍လည်းကောင်း ဆီမီးသည်တောက်လောင်ရာ၏။ ထိုဆီကုန်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ မီးစာကုန်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း မီးစာမရှိသည် ဖြစ်၍ ငြိမ်းရာ၏။ ရဟန်းတို့ ဤအတူပင် ရဟန်းသည် ကိုယ်အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကိုခံစား သည်ရှိသော် “ကိုယ်အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစား၏”ဟု သိ၏၊ အသက်အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစားသည်ရှိသော် “အသက်အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကိုခံစား၏”ဟု သိ၏၊ ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီးသည်မှ အထက်ဖြစ်သော နောက်ကာလ၌အသက်ဆုံးသည်တိုင်အောင် “ဤဘဝ၌ပင်လျှင် အလုံးစုံ သော ခံစားခြင်းတို့ကို မနှစ်သက်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍ ငြိမ်းအေးကုန်လတ္တံ့”ဟု သိ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
Hanoi Sunrise 24 November 2018
Posted in Dhamma	| Tagged conditionality, dhamma, paticcasampuppada
Posted on 1 Dec 2018 by Ashin Sopāka
“Dveme, bhikkhave, puggalā dullabhā lokasmiṁ. Katame dve? Yo ca pubbakārī, yo ca kataññū katavedī. Ime kho, bhikkhave, dve puggalā dullabhā lokasmin”ti.
“Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hai? Người thi ân trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời.”
ရဟန်းတို့ လောက၌ ရနိုင်ခဲကုန်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤနှစ်မျိုးတို့တည်း။ အဘယ် နှစ်မျိုးတို့နည်းဟူမူ— ရှေးဦးစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်၁လည်းကောင်း၊ ပြုဖူးသောကျေးဇူးကို သိ၍ ကျေးဇူးတုံ့ပြုတတ်သောပုဂ္ဂိလ်၂လည်းကောင်းတို့တည်း။ ရဟန်းတို့ လောက၌ ရနိုင်ခဲသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤနှစ်မျိုးတို့ပေတည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
White Breasted Kingfisher & Chinese Pond Heron
Posted in Dhamma	| Tagged compassion, dhamma, generosity, two kinds people